Global Voices teny Malagasy » Fitsangatsanganana Ahitana Fanantenana: Ny Fampiratiana Sary ‘Fanantenana’ 2017 Tany Colombo, Sri Lanka · Global Voices teny Malagasy » Print
Fitsangatsanganana Ahitana Fanantenana: Ny Fampiratiana Sary ‘Fanantenana’ 2017 Tany Colombo, Sri Lanka
Voadika ny 14 Febroary 2018 4:15 GMT 1	 · Mpanoratra Teodora Hasegan Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Mediam-bahoaka, Tsidika, Blaogim-Piarahamonina GV, Fankalazana, vovonana
Nasaina handray anjara tamin'ny Vovonana Global Voices izay natao tany Colombo, Sri Lanka aho tamin'ny taona 2017. Izany no fotoana voalohany nanatrehako ny Vovonana GV. Tena nihoatra lavitra ny zavatra noeritreretiko ny vovonana. Ny fifanakalozan-kevitra rehetra, ny resadresaka an-tsehatra, ny adihevitra ary ny fikarakarana nandritra ny fivoriana anatiny sy ny valan-dresaka ho an'ny daholobe izay niompana tamin'ny lohahevitra samihafa toy ny aterineto malalaka, ny zon'olombelona,ny hetsika sivily antserasera dia nanaitra ny saina ary nampiseho ny fahafahana sy ny fanamby tao anatin'izany ezaka izany. Toerana nahafahana nanangana fifandraisana, finamanana ary fiaraha-miasa teo amin'ireo mpandray anjara avy amin'ny firenena maherin'ny 70 ihany koa ny vovonana.
Afaka nandeha nitsidika ireo faritra lehibe tany Sri Lanka aho taorian'ny vovonana. Ny Zaridaina Viharamahadevi ny iray tamin'izany, ilay zaridaina ho an'ny daholobe tranainy indrindra sy lehibe indrindra any Colombo, eo anoloan'ny Lapan'ny Tanàna izay naorina tamin'ny vanim-potoanan'ny fanjanahantany ary eo akaikin'ny Mozea Nasionaly.
Manana vavahady maromaro ny zaridaina, manoloana ny Lalamben'ny Zaridaina ny iray, ny iray eo akaikin'ny Tranombokim-pirenena, ary ny iray fahatelo izay nandehanako dia manoloana ny Lapan'ny Tanàna. Nankafy ny dobo teo afovoan'ny zaridaina aho, ny akarioma eny amin'ny farany ankavia, ny farihy, ny tetezana mihantona, ary ny fahatsiarovana ny Ady Lehibe teny amin'ny farany atsimo.
Rehefa nandeha nitsangatsangana teo aho dia nahita ny afisy iray milaza ny fampiratiana sary mitondra ny lohateny hoe ‘Fanantenana’. Nokarakarain'ny Biraon'ny Firaisam-pirenena sy ny Fampihavanana (ONUR), miaraka amin'ny Delegasionan'ny Vondrona Eoropeana any Sri Lanka sy Maldiva ny tetikasa. Araka ny fanazavana ao amin'ny tranokalan'ny  Delegasion'ny Vondrona Eoropeana any Sri Lanka,
The initiative is a means for Sri Lankans to capture and share their ideas on what reconciliation means to them, in the context of reaching 70 years since Independence and the way forward towards a just and equitable society.
Fitaovana iray ho an'ny Sri Lankey ny hetsika mba hahatakarany sy hizarany ny heviny mikasika ny dikan'ny hoe fampihavanana manodidina ny tontolo nahatratrarana ny 70 taona hatramin'ny nahazoana ny Fahaleovantena sy ny lalana mankany amin'ny fiarahamonina marina sy mahitsy.
Voalaza ao amin'ny fanambarana ofisialy momba ny fampiratiana sary fa:
During the last seven decades, the country witnessed moments where we have been proud and united as a nation, as well incidents which have challenged our unity and made a significant impact on our lives forever.
Nandritra ny fitopolo taona farany, tsapan'ny firenena ny fanatreha-maso ny fotoana izay nireharehantsika sy niraisantsika saina ho firenena iray, sy ireo zava-tranga izay nanohitra ny fihombonantsika ary niteraka fiantraikany lehibe teo amin'ny fiainantsika hatrany.
Nasaina mba hanolotra ny fomba fijeriny momba ny lohahevitra mikasika ny firaisam-pirenena sy ny fampihavanana amin'ny fiainany andavanandro amin'ny maha olom-pirenena azy ireo ireo liana amin'ny fakana sary sy ireo mpaka sary matihanina. Nasongadina tao amin'ny fampirantiana sary ho an'ny daholobe ‘Fanantenana’ ireo anisan'ny notsongaina tamin'ireo mpandray anjara nahafa-po indrindra miisa 70 ary navoaka tao amin'ny fanisan'andron'ny Delegasionan'ny Vondrona Eoropeana 2018 sy tao amin'ny bokikely novokarin'ny ONUR ny sary voafidy.
Nampiseho ny fotoana maro isankarazany nandalo tamin'ny fiainana sy ireo endrika ny sary manan-danja ary nanampy tamin'ny fahatakarana ny fahasamihafan'ny olona sy ny kolontsaina ao amin'ny fiarahamonina Sri-Lankey.
Ireto ny sary sasantsasany manaparitaka ny hafatra momba ny firaisam-pirenena sy ny fampihavanana izay nalaiko tamin'ity fampiratiana manome aingam-panahy ity :
“Saripika mahaliana” sary tao amin'ny fampirantiana.
“Mpinamana” sary tao amin'ny fampiratiana.
“Mpilatsaka an-tsitrapo ho an'ny fampihavanana” sary tao amin'ny fampirantiana.
“Fetiben'ny Vesak” sary tao amin'ny fampiratiana.
“Miara-mientana” sary tao amin'ny fampirantiana.
Midika zava-dehibe ihany koa ny toerana nanaovana ny fampiratiana. Nomena ny anaran'ilay Mpanjakavavy Viharamahadevi, renin'ny Mpanjaka Dutugamunu ilay zaridaina. Natsangana teo amin'ny tany nomen'i Charles Henry de Soysaduring, fitondrana Britanika tao Sri Lanka, ho an'ny tanandehiben'i Colombo izany, ary nomena ny anaran'ny Mpanjakavavy Victoria hoe ‘Zaridaina Victoria’. Nandritra ny Ady Lehibe Faharoa, ny Tafika Britanika niaraka tamin'ny Brigady Aostralianina faha 17 tao amin'ny Zaridaina Victoria no nibodo ny toerana. Taorian'ny ady, naverina tamin'ny laoniny ny zaridaina ary nosokafana ho an'ny daholobe tamin'ny taona 1951.
Tsikaritro fa tena maneho ny lohahevitra mikasika ity fampihavanana ity mihitsy ilay zaridaina, ahitana ireo olona manana fotoana fialan-tsasatra, milalao, mandeha, maka sary:
Mankafy ny tontolo andro ao amin'ny zaridaina. Sary avy amin'ny mpanoratra.
Fakana andian-tsary tao amin'ny zaridaina. Sary avy amin'ny mpanoratra.
Miombon-kevitra amin'i Paul Godfrey aho, Mpanolotsaina ao amin'ny Delegasionan'ny Vondrona Eoropeana, izay nilaza hoe:
Through reconciliation, we believe there is the hope of more inclusive identities that value the diversity of people and cultures in the island.
Mino isika fa misy ny fanantenana amin'ny mari-panondroana ho an'ny rehetra izay manome lanja ny fahasamihafan'ny olona sy ny kolontsaina ao amin'ilay nosy amin'ny alalan'ny fampihavanana .
Ity no fanambarana iray izay milaza ny marina ho an'ireo toeran-kafa eto amin'izao tontolo izao izay nanana fotoan-dasa simban'ny ady.
Azo heverina ho toy ity tetezana mihantona ao amin'ny zaridaina ity ny fampihavanana: mbola mampifandray ireo toerana sy ireo olona ihany ny tetezana na dia somary mihozongozona aza. Anjaran'ny vahoaka ny manamafy orina ity tetezana ity .
Tetezana mihantona ao amin'ny zaridaina. Sary avy amin'ny mpanoratra.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/02/14/114892/